မြောက်ဒဂုံ မြို့နယ်တွင် ပဒူကောင် ကိုက်၍ အမျိုးသမီးတစ်ဦး သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွား - Cele Platform
(၉. ၆. ၂၀၁၉) ရက် ည ၈ နာရီ ၄၀ မိနစ် အချိန် တွင် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ၃၂ ရပ်ကွက် ဦးကြင်ဥ (၃)လမ်းတွင်
အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို အဆိပ်ရှိ ပိုးကောင် ကိုက်၍ သေဆုံးကြောင်း သိရှိရ၍ သွားရောက် ကြည့်ရှုခဲ့ရာ ပဒူတုတ်၍ သေဆုံးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိခဲ့ရသည်။
ထို့ကြောင့် ၃၂ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ စည်ပင်ကော်(၁)၊ မြိုနယ်မီးသတ်ဦးစီးမှူးနှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ (နာ၊ကူ)ရန်ကုန် ၊E. P. C နှင့် ပရဟိတအသင်းများ ပူပေါင်း၍ ပဒူအသိုက် အား ရှာဖွေ ရှင်းလင်းခြင်း များ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
သေဆုံး လူနာအား(နာ၊ကူ) ရန်ကုန် မှမြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးခြင်းများကို ည ၁၁ နာရီ ၄၅မိနစ် တွင် အားလုံး ဆောင်ရွက် ပြီးစီး ခဲ့သည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။
မွောကျဒဂုံ မွို့နယျတှငျ ပဒူကောငျ ကိုကျ၍ အမြိုးသမီးတဈဦး သဆေုံးမှု ဖွဈပှား
(၉. ၆. ၂၀၁၉) ရကျ ည ၈ နာရီ ၄၀ မိနဈ အခြိနျ တှငျ မွောကျဒဂုံမွို့နယျ အုပျခြုပျရေးမှူးမှ ၃၂ ရပျကှကျ ဦးကွငျဥ (၃)လမျးတှငျ
အမြိုးသမီးတဈဦးကို အဆိပျရှိ ပိုးကောငျ ကိုကျ၍ သဆေုံးကွောငျး သိရှိရ၍ သှားရောကျ ကွညျ့ရှုခဲ့ရာ ပဒူတုတျ၍ သဆေုံးခွငျး ဖွဈကွောငျး သိရှိခဲ့ရသညျ။
ထို့ကွောငျ့ ၃၂ ရပျကှကျ အုပျခြုပျရေးမှူး၊ စညျပငျကျော(၁)၊ မွိုနယျမီးသတျဦးစီးမှူးနှငျ့ တပျဖှဲ့ဝငျမြား၊ (နာ၊ကူ)ရနျကုနျ ၊E. P. C နှငျ့ ပရဟိတအသငျးမြား ပူပေါငျး၍ ပဒူအသိုကျ အား ရှာဖှေ ရှငျးလငျးခွငျး မြား ပွုလုပျခဲ့ကွသညျ။
သဆေုံး လူနာအား(နာ၊ကူ) ရနျကုနျ မှမွောကျဥက်ကလာပဆေးရုံသို့ ပို့ဆောငျပေးခွငျးမြားကို ည ၁၁ နာရီ ၄၅မိနဈ တှငျ အားလုံး ဆောငျရှကျ ပွီးစီး ခဲ့သညျဟု သတငျးရရှိပါသညျ။